URosanes kunye noluhlu lwakhe "Izilwanyana zeJometri" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izilwanyana Inkuthazo enkulu Amagcisa amaninzi kwaye ajikeleze apha sinemizekelo eliqela yawo. Izilwanyana zasendle zeLipscomb ngeepensile ezinemibala, iiceramics in Imilo yezilwanyana iTurowska, igcisa laseNorway kunye izilwanyana eziqhelekileyo zommandla wakho okanye ukudityaniswa phakathi izityalo kunye nezilwanyana ngu-Ellen Jewet Olunye ulonwabo oluhle kwiifomathi ezahlukeneyo kunye nobuchule bokusizisa kwindalo kwindalo yayo ecacileyo.
Le fusion ikwafumaneka kwi Imizobo entsonkothileyo nguKerby Rosanes Oko kusibuyisela ukujonga kwethu kwezo zilwanyana zitsalwe ngokumangalisayo ukuzidibanisa neemilo zejiyometri ngendlela enobuchule kunye neyantlandlolo. NgooRosanes sijongana nomculi onobuchule obukhulu njengoko unokuthelekelela kwimifanekiso yakhe nganye.
URosanes ngumculi wasePhilippines kwaye, ngaphandle kokuba eyaziwa kwi-intanethi kuthotho lwemizobo, ubuyile noluhlu olunesihloko esithi "Izilwanyana zeJometri" okanye "Izilwanyana zeJometri."
Lo mzekeliso sebenzisa iipensile eziqhelekileyo ukwenza umsebenzi wakhe, ngeli xesha exuba izilwanyana zasendle kunye nezo zeemilo zejometri ezibonelela ngesiphumo esiyimpumelelo kakhulu ukusishiya simangalisiwe kukuqala komsebenzi wakhe. Umsebenzi ogqwesileyo esinokusondela kunye nawo kwizilwanyana ezibonakala ngathi ziyaphula olo lwakhiwo lwejometri olubathintelayo okanye ukutsiba okanye ukubhenela kuyo nayiphi na intshukumo yemvelo ngokukodwa kula mahashe, izinja okanye iminenga.
Unayo Facebook, Instagram y Kwiwebhu ukwazi ukulandela umsebenzi wakhe kwaye ufumane Olunye uthotho lweeprojekthi Unokumangalisa ngayo ukuzoba abathandi kwakhona kwaye abanomdla okhethekileyo womzekeliso.
Ngokuqinisekileyo ayizukubakho hayi eyokuqala neyokugqibela Ngamana singabona iiRosane zisimangalisa ngomsebenzi wakhe wobugcisa obukumgangatho ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo yezilwanyana edityaniswe nejometri emsulwa
Isandra GL sitsho
UArantxa García Uthandana neflamenco yakho?
Phendula uSandra GL
UArantxa García Ethandweni sitsho
Hahahaha yintoni ikarike! Le yeyona currado ingaphezulu hahaha
Phendula Arantxa García Enamorado
UArantxa García ndiyathandana kodwa kujongeka ngathi yinto hahaha
UArantxa García Uyathandana? Ndiyirhoxisa lento bendiyithetha hahaha
Hahahahahahahahahaha uapa ayonto imbi kangako
UArantxa García Ethandweni bekusoloko kusithiwa uthelekiso lunenzondo ???
lolplay ayichazwanga sitsho
Le kaway kakhulu kwaye ndiyenzile into ondinike yona elungileyo kodwa ezo ngqondo zibalaseleyo
Phendula lolplay engachazwanga
Ndingayicela imvume yokufumana omnye wale mizobo njenge tattoo?